प्रहरी महानिरीक्षकमा ठाकुर ज्ञवाली नियुक्त - Everest Dainik - News from Nepal
२०७६, २८ माघ मंगलवार
काठमाडौं: सरकारले ठाकुर ज्ञवालीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको छ । मंगलबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको हो ।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ज्ञवालीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । ज्ञवाली वरिष्ठता र जेष्ठताका आधारमा आइजिपी नियुक्त भएका हुन् । ठाकुर नपाल प्रहरीको २७औं आइजिपी बनेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए आफ्नै निवासमा मन्त्रिपरिषद बैठक
हाल प्रहरी नायब महानिरीक्षकका रुपमा उनी प्रदेश नं. १ प्रहरी प्रमुखका रुपमा कार्यरत् थिए । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा भएका डीआईजी ज्ञवाली संगठनमा इमान्दार र खरो स्वभावका अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् ।
२०२२ असोज २८ गते साविक वादीकोट गाविस–९, प्युठानमा जन्मिएका ज्ञवाली २०४७ असार २५ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् । उनको पहिलो पोस्टिङ प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस सर्वत्र विरोधपछि दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
ज्ञवाली २०५८ मा डीएसपी, २०६६ मा एसपी, २०७३ सालमा एसएसपी र २०७५ असोज २८ गते डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक को बन्ला?
ट्याग्स: ठाकुर ज्ञवाली, प्रहरी महानिरीक्षक, मन्त्रिपरिषद बैठक